Google Lighthouse inouya kuFirefox seye browser inowedzera | Linux Vakapindwa muropa
Google yakavhurwa munguva pfupi yapfuura nhau dzekuburitswa kweye Lighthouse chishandiso, pyewebhusaiti yeFirefox, iyo yakapihwa somubatsiri yebrowser. Iyo Firefox yekuwedzera-yaive yaive yakagadzirirwa neboka reLightouse rekusimudzira uye inoshandisa iyo PageSpeed ​​Insights API kuburitsa mishumo.
Kune avo vasingazive neLighthouse, iwe unofanirwa kuziva kuti iri rakavhurika sosi yekushandisa otomatiki yevagadziri vewebhu vanobatanidzwa muChannel iyo yakagadzirirwa kugadzirisa kunaka kwewebhu webhu.
Ndiine Mwenje weChiedza, ingo mhanyisa akateedzana bvunzo kupesana neiyo peji uyezve izvi zvinogadzira mushumo pamusoro pekuita kweiyo peji. Kubva pano, vagadziri vanogona kushandisa iyo data yakawanikwa sezviratidzo, iyo yavanogona kuita kunatsiridza yavo webhu kunyorera.
Chaizvoizvo neGoogle Lighthouse iwe unogona kuzivisa zvakawanda nezve webhusaiti, kusanganisira zvinotevera:
Zvinotora nguva yakareba sei kuti mufananidzo wekutanga kana zvemukati zvioneke pamushandisi.
Kunyangwe iyo saiti robhoti.txt faira rakaumbwa nemazvo uye rinotakurika
Apo vashandisi vanogona kusangana nepeji rako kekutanga
Yako saiti yekumhanyisa chiyero
Chirevo chakakamurwa muzvikamu zvakasiyana siyana:
Performance: izvo zvinokuratidza iwe zvekutanga zvesaiti yako mashandiro sezvazviri ikozvino. Chirevo ichi chinotarisa pane saiti kurodha kumhanya kupfuura chero chimwe chinhu.
Mukana: iyo inopa mikana inogona kukubatsira kukurumidza yako saiti uye kugadzirisa mashandiro. Iyi mikana yakanyanya kusarudzika, sekugonesa mameseji kumanikidza.
Kuongorora: iyo inonongedza nyaya dzakananga pane yako saiti dzinoda kugadziriswa, senge kuve nemafaira saizi akakurisa uye anogona kudzikisira nguva dzekutakura. Ivo vachakuudza chaizvo kuti chii chiri dambudziko, kuti iri kukanganisa sei yako saiti, uye nei ichida kugadziriswa.
Kufambira mberi Webhu- iyo inokupa yakadzama kuongorora kwewebhu webhu yako uye inogona kuve nechokwadi chekuti nharembozha yako yakavimbika uye inoshanda kune vateereri vako. Izvi zvakakosha; Zvishandiso zvakawanda zvekuongorora hazvipe izvi.
Kuwanika: kukuratidza nzira dzaungaite kuti saiti yako iwanikwe uye nyore kufamba kana kushandisa. Izvi hazvifanire kufuratirwa, sezvo UX dhizaini yakakosha mukubudirira kwenzvimbo.
Maitiro ari nani: iyo inotsanangura nzira dzakanakisa dzekuvimbika yako saiti, kusanganisira kushandisa HTML uye kuratidza mifananidzo.
SEO: iyo inotarisisa kutarisa kuti saiti yako ingaite sei muinjini dzekutsvaga uye zvakasiyana zvinhu zvinokanganisa kugona kwayo chinzvimbo. Vachatarisa zviratidziro zvemukati zvemhando, kutsvagisa, kuwiriraniswa kwenharembozha, nezvimwe, uye nekukubatsira kuona nzira nyowani dzekuwedzera yako yekutsvaga injini kuoneka.
Chekupedzisira, kune avo vanofarira kuisa uye kuyedza iyi yekuwedzera, vanogona kuitsvaga muchitoro chekuwedzera cheFirefox kana vanogona. kubva pane iyi link iripazasi.
Kana vari avo vanoshandisa Chrome, sezvambotaurwa pakutanga, Lighthouse inosanganisirwa yakanangana neChannel yekuvandudza maturusi, mune iyo "Audits" pani.
Kunyangwe iri zvakare kuwanikwa seye browser yekuwedzera, iyo inogona kuiswa kubva iyi link
Nezve mashandisiro aunoita chishandiso zvese graphical uye mune CLI modhi, unogona kutarisa zvinyorwa zvacho Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Google Lighthouse inouya kuFirefox seye browser yekuwedzera